Multi uji eze akpụzi Nsukka na Suppliers - China Multi uji eze akpụzi Factory
Ekwentị: + 86-18823354971
Nhazi & Injinia
Mgbakọ & cochọ Mma
Otutu oghere akpụzi
Medical Device akpụzi
Omenala Plastic Ebu
Home Ngwaọrụ akpụzi
Single Shot & 2K akpụzi
High nkenke Ọgwụ akpụzi
Cold agba ọsọ & Hot Runner akpụzi
Omenala akpụzi Ọgwụ Ọgwụ na ịkpụzi Custom High nkenke ...
Omenala OEM ebu eme emeputa
ABS omenala injection ịkpụzi Ndinam ụlọ ọrụ
Omenala ebu na imewe
8 cavities electronic plastic injection ebu
Imirikiti ndị ahịa na-ahọrọ ọnya ikuku dị ọtụtụ ebe ọ nwere ike ịchekwa ọtụtụ ego imepụta, mana tupu ịme mkpebi, ịkwesịrị ịtụle ụfọdụ ihe.
8 Oghere Plastic Ọgwụ akpụzi
N'ihe banyere imepụta ihe nkedo ogwu gị, ezi na nkwekọ bụ mkpịsị ugodi nke ngwaahịa emechara.
48 Cavities anụ ụlọ ngwa ọgwụ ebu
Ọ bụrụ na nha nke ngwaahịa ahụ pere mpe, na-ewukwasị oghere 24 ma ọ bụ 48, a ga-ekwupụta ihe kpatara emeghị oghere 30 ma ọ bụ 40.
Nke a bụ n'ihi na iji dozie nhazi usoro na ngwongwo ngwongwo ngwongwo, ọkachasị na Ọkpụkpụ agba ọsọ mgbe eji ya.
Gịnị bụ Multi Cavity akpụzi?
Ngwongwo otutu oghere bu ihe ogwu ogwu nke nwere ihe kariri otu oghere nke otu akuku, na ebu ihe eji emeputa otutu ihe di n'otu oge n'oge mmeputa obula.
A na-ejikarị ihe nkedo ogwu dị iche iche eme ihe maka ngwaahịa dị elu ebe ọ na-enye gị ohere iji oge okirikiri rụọ ọrụ nke ọma ma mepụta akụkụ ndị ọzọ site na otu ebu ahụ n'ime nkwa ọgbaghara.
Olee uru nke otutu-oghere oghere Ebu?
Igwe nwere ọtụtụ oghere nwere ọtụtụ oghere n'otu akụkụ ahụ. Ọ nwere ike ịmepụta ọtụtụ akụkụ nke ọ bụla na ịkpụzi ịkpụzi ọ bụla, nke dị mma maka imepụta oke. Fọdụ uru ndị ọzọ pụtara gụnyere:
Naa nkesa nnyefe oge: Ebe ọ bụ na otutu akụkụ nwere ike dechara na nke ọ bụla okirikiri, quotas nwere ike ruru ngwa ngwa ..
Belata ụgwọ ọrụ: E jiri ya tụnyere imepụta ihe anọ dị iche iche, ebu na oghere anọ dị ọnụ ala ma nwee ọnụ ala nke inwe.
Akụkụ ala dị ala: Mkpokọta ọrụ na oge nke igwe ọtụtụ ebu na-adị mkpụmkpụ, nke na-ebelata ọnụahịa nke akụkụ.
Order scalability: O siri ike ịchọta ọchịchọ maka otu nde akụkụ na otu oghere oghere. Ebu otutu na-eme ka ị ghara inye iwu buru ibu n'oge.
A Single akpụzi VS. Otutu-Cavity akpụzi, nke kachasị mma maka ọrụ gị?
Otu ebu nke nwere ike mepụta otu okirikiri, ebe ebu nke nwere ọtụtụ oghere na-ewepụta ihe karịrị otu ngwaahịa kwa okirikiri.
Ke ofụri ofụri, ị na-ahọrọ otu ma ọ bụ multi uji eze ebu dabere na gị timeframe na ina. Mgbe nnukwu olu yiri akụkụ dị mkpa n’ime oge a kara aka, ịkpụzi ọtụtụ oghere na-abụkarị nhọrọ kacha mma. Ebu otutu ebu na-emeputa imeputa ihe ndi ozo, ngwa ngwa n'ime igba nkwa.
Agbanyeghị, ebu ọtụtụ oghere abụghị nhọrọ kachasị mma maka ọrụ niile. A otutu-uji eze ebu na-achọ a ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọkpụrụkpụ n'ihu ego karịa otu-uji eze ebu. Createmepụta ihe na-eme ọtụtụ ihe karịa iji nweta ego n'ihi na ha chọrọ ọtụtụ ihe, ọrụ, na ume ọrụ karịa otu ebu oghere.
Ọ bụrụ na ịmịpụta akụkụ n'ọtụtụ dị elu, itinye ego na ebu na ọtụtụ oghere nwere ike ịkwụ ụgwọ.
Ma na obere mpịakọta, ọ nwere ike ịba uru karịa ịnakwere maka otu oghere.
Multi-Cavity Ebu VS. Ebu ezinụlọ:
Kedu nke kachasị mma maka mkpa gị? A na-enwekarị ihe nkedo ọgwụ dị iche iche dị iche iche na ngwongwo ọgwụ ezinụlọ, ma ha abụọ dị nnọọ iche.
Ọ bụ ezie na ebu ogwu ezinụlọ gụnyere ọtụtụ oghere, oghere ndị ahụ abụghị otu, a na-eji ha ịmepụta ihe dị iche iche nke ngwaahịa n'otu oge.
Ọ bụ ezie na ihe na-akpụzi ezinụlọ nwekwara ọtụtụ oghere, akụkụ ndị ahụ mepụtara nwere nha yiri ya mana atụmatụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na akụkụ gị chọrọ akụkụ abụọ dị iche iche nke fọrọ nke nta ka ọ hà, ịnwere ike iji ngwá ọrụ a mepụta ha n'otu oge. O nwere otu uru dị iche iche nke otutu, ma nwee ụfọdụ uru ndị ọzọ:
• belata ngụkọta tooling Amawaputala
• Nrụpụta ọrụ na-abawanye ebe ọ bụ na ihe abụọ ma ọ bụ karịa mepụtara n'otu usoro ogwu
• Obere olu nwere ike: ihe nkedo ezinụlọ bụ ihe dị ọnụ ala maka iwu dị ala, ebe ọ dịghị mkpa ịgba ọsọ ebu
• Ezigbo maka prototyping, ebe ọ bụ na a ngwaahịa nwere ike zuru ezu kpọkọta iji naanị otu ezinụlọ ebu prototype, ọ nwere ike belata tupu mmepụta akwụ ụgwọ.
Agbanyeghị, n'ihi ụdị dị iche iche nke oghere dị na ngwongwo ezinụlọ, ọ nwere ike isiri gị ike ijigide agbanwe agbanwe n'oge mmepụta akụkụ, si otú a na-abawanye ohere gị ịkpụzi ntụpọ.
Professional nkenke akpụzi na Nkedo Manufacturer
Copyright - 2010-2021: Guangdong Yuanfang Technology Industry Co., Ltd. Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap
Omenala akpụzi, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Akpụzi Factory, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Ndị na-emepụta ebu ebu, Plastic Fanye Nkedo,